IEE & EMP Reports – MPRG CO., LTD.
One of the associated companies of MPRG called Htet Yee Linn Mining and Refinery Co.Ltd. has been working at the Kyitaukpauk Area, Singu Township in Mandalay Region located at 73 kilometer North of Mandalay, about2hour motor drive on Mandalay-Moegoak highway and one hour drive with off road by Vehicle. MPRG is the first local company in Myanmar to useasystematic gold exploration and production technique.
Company: Htet Yee Linn Mining and Refinery Co.Ltd
IEE Report (SGU-6A)
ထက်ရည်လင်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
မြေအောက်ရွေသတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ကွက် (SGU-6A)
ကျည်တောက်ပေါက်‌ဒေသ ၊ စဥ့်ကူမြို့နယ် ၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊၊
One of the associated companies of MPRG called Myauk Kyun Thu Ma Ma Mining and Refinery Co., Ltd. has been working at the Kyitaukpauk Area, Singu Township in Mandalay Region located at 73 kilometer North of Mandalay, about2hour motor drive on Mandalay-Moegoak highway and one hour drive with off road by Vehicle. MPRG is the first local company in Myanmar to useasystematic gold exploration and production technique.
Company: Myauk Kyun Thu Ma Ma Mining and Refinery Co., Ltd.
EMP Report (CT-33A) & (CT-33B)
မြောက်ကျွန်းသူမမ မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
အသေးစား ရွေသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ကွက် (CT-33A) နင့် (CT-33B)
ကန်တောင်ဒေသ ၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု ၊ စဥ့်ကူးမြို့နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊၊
IEE Report (SGU-5A)
ကျည်တောက်ပေါက်ဒေသ ၊ စဥ့်ကူမြို့နယ် ၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊၊
One of the associated companies of MPRG called Aung Htun Linn Shein Win Mining and Refinery Co., Ltd. has been working at the Kyitaukpauk Area, Singu Township in Mandalay Region located at 73 kilometer North of Mandalay, about2hour motor drive on Mandalay-Moegoak highway and one hour drive with off road by Vehicle. MPRG is the first local company in Myanmar to useasystematic gold exploration and production technique.
Company: Aung Htun Linn Shein Win Mining and Refinery Co., Ltd.
IEE Report (SGU-205)
အောင်ထွန်းလင်းရှိန်၀င်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
ကျည်တောက်ပေါက်‌‌ဒေသ ၊ စဥ့်ကူမြို့နယ် ၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊၊
IEE Report (SGU-4A)
အောင်ထွန်းလင်းရိန်၀င်း မိုင်းနင်းအင်(န်)ရီဖိုင်(န်)နရီ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
မြေအောက်ရွေသတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ကွက် (SGU-4A)
ကန်တောင်ဒေသ ၊ စဥ့်ကူမြို့နယ် ၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊၊
Htet Yee Linn Mining and Refinery Co.Ltd.
Myauk Kyun Thu Ma Ma Mining and Refinery Co., Ltd.
Aung Htun Linn Shein Win Mining and Refinery Co., Ltd.